Ko kana ini ndiine macOS Sierra beta yakaiswa paMac yangu panoburitswa vhezheni yepamutemo? | Ndinobva mac
Uyu ndeimwe yemibvunzo iyo yatinowanzogamuchira pawebhu uye pane edu masocial network kana tichivhura vhezheni nyowani yesisitimu yekushandisa yeMac kana kunyangwe emidziyo yeIOS ine zvitsva zvazvino. Zvakanaka, uyu mubvunzo uri nyore kupindura uye ndewekuti kazhinji kana isu tichiisa yazvino beta beta vhezheni yeMacOS Sierra, iOS, watchOS, nezvimwe, tiri kuisa yekupedzisira vhezheni yeiyo sisitimu uye seyakajairwa mutemo hazvizotiratidze iyo yekuvandudza pane yedu Mac.
Zvino mubvunzo unotevera ndewokuti, Chii chandinofanira kuita kuti ndiise iyo nyowani vhezheni ipapo? Zvakanaka, hatifanirwe kuita chero chinhu zvakananga. Kana isu tichida kuenderera neApple beta chirongwa paMac yedu chero chikonzero kana isu tichida kuisa yepamutemo vhezheni yechangobva kuvhurwa sisitimu yekushanda, zvakanakisa kugadzira backup kopi yekombuta yedu uye kutanga kurodha yazvino vhezheni kubva ku Mac App Store. Kana data redu radzokororwa uye kutsigirwa paMac isu tinogona kuita kuiswa kwakachena kweiyo inoshanda sisitimu nekuita yakachena kuisirwa.
Asi chero zvakadaro, kana isu tatova neazvino beta vhezheni yeanoshanda system, izvo zvatave kunyatsoisa paMac ndiyo yazvino vhezheni inowanikwa, iyo inowanzo kunzi GM (Golden Master) uye hatifanirwe kunetseka kugadzirisa yedu system kubvira zvichave kubva panguva iyoyo.
Chokwadi ndechekuti kuve neshanduro dze beta dzakaiswa paMac handizvo zvatinokurudzira kuti ndive Mac, nekuti idzi shanduro dzinogona kugara dziine tupukanana tudiki kana kusapindirana nechimwe chishandiso / chishandiso chatinoshandisa muzuva redu rehupenyu hwezuva nezuva uye uve dambudziko so zvakanakisa kuve neaya beta akaiswa pane ekunze madhiraivha ekuyedza kana zvakananga pachikamu chedu dhiraivha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Ko kana ini ndiine macOS Sierra beta yakaiswa paMac yangu panoburitswa vhezheni yepamutemo?
Apple Music: Zvakakosha Izvo Here? Ichi chave chiitiko changu